;နေစရာကင်းမယ့်နေတဲ့ မြေးဖိုးနှစ်ယောက်အတွက် နေစရာအိမ်လေး ဆောက်ပေးတော့မယ့် အကြောင်းမျှဝေလာတဲ့ ချစ်သုဝေ - Myannewsmedia
အဆိုတျောသရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ခဈြသုဝကေို ပရိသတျတှနေဲ့ အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးဖို့ မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ ခဈြသုဝကေတော့ အိမျထောငျကပြွီး ကတညျးက အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ရပျနားထားပွီး ပရဟိတလုပျငနျးတှကေို ခငျပှနျးဖွဈသူ လငျးလငျးနဲ့အတူ တှဲရကျပွီး လုပျကိုငျဆောငျရှကျနလေကျြရှိပါတယျ။ သူမဟာဆိုရငျ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျနဲ့အတူ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။
Covidကာလမှာ လိုအပျနတေဲ့သူတှအေတှကျ အလှူရှငျတှထေံက ရရှိထားတဲ့ အလှူငှတှေနေဲ့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျလှူဒါနျးပေးလရှေိ့တာကိုလညျး တှရေ့မှာပါပဲနျော။ အောကျတိုဘာ(၂၈)ရကျနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ”Messenger ထဲပုံလေးတဈပုံဝငျလာတယျ။မင်ျဂလာပါ ပရဟိတ နဲ့ Clean Yangonရဲ့ ပဲ့ကိုငျ ကိုဇပေို့တာ “အိမျ” ပုံပွိုနတောလား??? မွကွေီးထဲနဈဝငျနတောလားတံခါးပေါကျလညျးမရှိ😞ဘဝတှဟော ခါးတယျ။ဒီCOVIDဟာ ကိုယျ့ကိုသငျပေးတာတှအေမြားကွီး ဒါ လုပျကိုလုပျပေးရမှာမို့ခွတေံရှညျ
လုံခွုံမယျ့အိမျလေးဖွဈစဖေို့,,ဖရေေ မတေို့ အိမျလေးပွနျဆောကျပေးကွမယျလို့တောငျမပွောရသေးဘူး ကိုယျ့လူက မကျြရညျတှနေဲ့မိနျးမရယျ ပွတဲ့ပုံတှရေယျမွငျတာနဲ့ ဖတေို့ ဆောကျပေးကွမယျတဲ့ ဒီနေ့ အရောကျသှားကွညျ့ခဲ့တယျ။ကွီးကွပျပေးမယျ့ ကိုဇတေို့ ကြေးဇူးပါ “လို့ဆိုပွီး ဆငျးရဲခြို့တဲ့လှနျးတဲ့ မွေးအဖိုးနှဈယောကျအတှကျ နစေရာအိမျလေးကို ပွနျလညျပွုပွငျဆောကျပေးခငျြတဲ့အကွောငျးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ မှနျမွတျလှနျးတဲ့စိတျထားလေးကို ကွညျ့ပွီး ပရိသတျတှလေညျး ကွညျနူးမိမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးသာယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source….Chit Thu Wai’s Facebook
အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေကို ပရိသတ်တွေနဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လင်းလင်းနဲ့အတူ တွဲရက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Covidကာလမှာ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အလှူရှင်တွေထံက ရရှိထားတဲ့ အလှူငွေတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးလေ့ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါပဲနော်။ အောက်တိုဘာ(၂၈)ရက်နေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက”Messenger ထဲပုံလေးတစ်ပုံဝင်လာတယ်။မင်္ဂလာပါ ပရဟိတ နဲ့ Clean Yangonရဲ့ ပဲ့ကိုင် ကိုဇေပို့တာ “အိမ်” ပုံပြိုနေတာလား??? မြေကြီးထဲနစ်ဝင်နေတာလားတံခါးပေါက်လည်းမရှိ😞ဘဝတွေဟာ ခါးတယ်။ဒီCOVIDဟာ ကိုယ့်ကိုသင်ပေးတာတွေအများကြီး ဒါ လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာမို့ခြေတံရှည်
လုံခြုံမယ့်အိမ်လေးဖြစ်စေဖို့,,ဖေရေ မေတို့ အိမ်လေးပြန်ဆောက်ပေးကြမယ်လို့တောင်မပြောရသေးဘူး ကိုယ့်လူက မျက်ရည်တွေနဲ့မိန်းမရယ် ပြတဲ့ပုံတွေရယ်မြင်တာနဲ့ ဖေတို့ ဆောက်ပေးကြမယ်တဲ့ ဒီနေ့ အရောက်သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ကြီးကြပ်ပေးမယ့် ကိုဇေတို့ ကျေးဇူးပါ “လို့ဆိုပြီး ဆင်းရဲချို့တဲ့လွန်းတဲ့ မြေးအဖိုးနှစ်ယောက်အတွက် နေစရာအိမ်လေးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မွန်မြတ်လွန်းတဲ့စိတ်ထားလေးကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ကြည်နူးမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ငွေကျပ် (၅) သိန်းထိ လေလံဈေးမြင့်တက်လာပြီဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ;မျှော်လင့်ခြင်းတံခါးပေါက်ပန်းချီကား
Next post ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နားထားပေမယ့် အိမ်မှာမနားရပဲ ညီမလေးဥဥရဲ့ အလုပ်မှာ လက်တိုလက်တောင်း ကူညီပေးနေရတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု